पिल्सको जथाभावी प्रयोगले जोखिममा किशोरीः ब्लिडिङ डिसअर्डरदेखि बाँझोपनको समस्या :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कमला गुरुङ बिहीबार, वैशाख २२, २०७९, ०६:०१:००
तस्बिर: जीसन्ड डट बन्ड डट डी।
काठमाडौं- धादिङ्गकी १८ वर्षीया एक किशोरीलाई केही दिनदेखि लगातार पेट दुखिरहेको थियो। महिनावारी भएकी थिइनन्। तर योनिबाट भने रगत बगिरहेको थियो।
रगत बग्न नरोकिएपछि ती किशोरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माध्यमबाट स्त्री तथा प्रसूति रोग विशषेज्ञ डा रंगीना लाइकंगबमको सम्पर्कमा आइन्। ती युवतीले दैनिकजसो नै उनलाई अनेकौ जिज्ञासा राख्न थालिन्।
‘आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की खाएपछि बेस्सरी पेट दुख्यो भने के गर्ने? रगत पनि देखापरेको छ के गर्ने? लगायतका जिज्ञासा राख्दै उहाँ र उहाँको पार्टनरले निरन्तर मलाई फेसबुकमा म्यासेज गर्नु भएको थियो’ डा रंगीनाले भनिन्।
ती युवतीले आफ्नो सबै मेडिकल रिपोर्टहरु फेसबुकमै डा रंगीनालाई पठाइन्। उनका अनुसार यौन सम्पर्कपछि ती युवतीले आकस्मिक गर्भ निरोधक चक्की पिल्स सेवन गरेकी थिइन्। पिल्स खाइसकेपछि पनि ती युवती गर्भवती भइन्। तर उनको गर्भ पाठेघरमा नभई गर्भनलीमा गएर बस्यो। उनको अवस्था सामान्य थिएन। डा रंगीनाले तत्काल अस्पताल भर्ना गरेर शल्यक्रिया गर्न सुझाव दिइन्।
‘ती युवती पिल्स खाएपछि पनि गर्भवती भएकी थिइन्। उनको गर्भ पाठेघरमा नभई गर्भनलीमा बसेको भएर मैले जहाँ हुनु हुन्छ त्यहाँको अस्पतालमा तत्काल भर्ना गर्नु नत्र ज्यानलाई खतरा छ भनेर सुझाव दिए’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि उहाँहरु सम्पक विहीन हुनुभयो। ती युवतीको अवस्था जटिल थियो।’
काठमाडौंकी अर्की १८ वर्षीया एक युवती पनि लगातारको पेट दुखाईपछि अस्पताल पुगिन्। एपेन्डिसाइटीस भएको आशंकामा उनले भिडियो एक्सरे गरिन्। तर रिपोर्ट सामान्य देखिएपछि चिकित्सकले गर्भ जाँच गराउन सुझाव दिए। परीक्षणपछि उनको पेटमा गर्भ रहेको देखियो। तर ती युवतीको पनि पाठेघरमा नभई गर्भनलीमा गर्भ बसेको थियो।
ती युवतीले पनि असुरक्षित यौन सम्पर्कपछि आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की पिल्स खाएकी थिइन्। पिल्स खाएपनि उनको गर्भ रहन गएको ती चिकित्सकले बताए।
सामान्यतया पिल्स विशेषगरी दुई किसिमको हुन्छ। एक, आकस्मिक गर्भनिरोधक पिल्स र दोस्रो, सामान्य ओरल गर्भनिरोधक पिल्स। यी दुवै पिल्सको प्रयोगको उद्देश्य एउटै छ, अनिच्छित गर्भ हुनबाट रोक्नु।
किशोरीहरुले चिकित्सकको सल्लाह र परामर्श बिना जथाभावी पिल्सको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको डा रंगीना बताउँछिन्।
भन्छिन्, ‘अविवाहित युवतीहरु रगत बग्ने, पेट दुख्ने समस्या लिएर धेरै आउँछन्। जाँचबुझ गर्ने क्रममा उनीहरुले आफु खुशी पिल्सको प्रयोग गरेको पाउँछु। यो क्रम अहिले धेरै नै बढेको छ।’
परिवार नियोजन सेवाको दुई वटा विधि मात्र पुरुषले प्रयोग गर्न सक्छन्। एक, कण्डमको प्रयोग र दोस्रो, स्थायी बन्ध्याकरण। तर यी दुवै विधि प्रयोग गर्नेको संख्या कम रहेको महाशाखा अन्तर्गतको परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्याल बताउँछिन्।